မိမိကိုယ်မိမိ အဆုံးစီရင်မှု မဖြစ်ပွားစေရန် . . . – Healthy Life Journal
မိမိကိုယ်မိမိ အဆုံးစီရင်မှု မဖြစ်ပွားစေရန် . . .
———၊ ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ၊———
ကမ္ဘာတ၀န်းလုံး သေဆုံးသူတွေထဲမှာ ၁ ဒဿမ ၄ ရာခိုင်နှုန်းက မိမိကိုယ်မိမိသတ်သေမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်။ လူဦးရေတစ်သိန်းမှာ တစ်နှစ်အတွင်း မိမိကိုယ်မိမိသတ်သေသွားသူ (၁၁ ဒဿမ ၄) ယောက်ရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူဦးရေတစ်သိန်းမှာ တစ်နှစ်အတွင်း မိမိကိုယ်မိမိအဆုံးစီရင်သူ ၂၀၀၅ ခုနှစ်က ၃ ဒဿမ ၅ ယောက်ရှိပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ ၉ ဒဿမ ၅ ယောက်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။( Statista 2020)။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မိမိကိုယ်မိမိသတ်သေသွားသူစုစုပေါင်း ၄၀၀၀ ကျော်ရှိတယ်လို့လည်း ဖတ်လိုက်ရတယ်။ မိမိကိုယ်မိမိသတ်သေသူတစ်ယောက်ရှိရင် မိမိကိုယ်မိမိသတ်သေဖို့ ကြိုးစားသူက ၂၀ ယောက်ရှိပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေး- ကုသရခက်တဲ့နာတာရှည်ရောဂါ၊ နာတာရှည်နာကျင်ကိုက်ခဲရောဂါနဲ့ မသန်စွမ်းဖြစ်စေတဲရောဂါခံစားရသူတွေထဲမှာ မိမိဘ၀ကို အရှုံးပေးချင်စိတ်ရှိသူများပြားတယ်။ ဥပမာ-ကျောက်ကပ်တုစက်နဲ့ ကုသဖို့ လိုအပ်တဲ့ နာတာရှည်ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ နာတာရှည်အဆုတ်ရောင်အဆုတ်ပွ (COPD)ရောဂါ၊ ကင်ဆာရောဂါ၊ HIV/AIDS ခုခံအားကျဆင်းရောဂါ၊ လေးဘက်နာရောဂါ (Quadriplegia)၊ အထွေထွေကြွက်သားသေရောဂါ (Multiple Sclerosis) ၊ နာတာရှည် နှလုံးအားနည်းရောဂါ၊ ဦးနှောက် လေဖြတ်ရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါနဲ့ လူငယ်တွေထဲမှာပန်းနာရောဂါ စသည်တို့ဖြစ်တယ်။
စိတ်ကျန်းမာရေး- မိမိကိုယ်မိမိသတ်သေသူတွေထဲမှာ၊ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က စိတ်ရောဂါတစ်ခုခု ခံစားနေရတာတွေ့ရှိရတယ်။ စိတ်ကျရောဂါ၊စိတ်ကျစိတ်ကြွရောဂါ၊ အရက်စွဲရောဂါ၊ မူးယစ်ဆေးစွဲရောဂါနဲ့ စိတ်ကစဉ့်ကလျားရောဂါများ ဖြစ်တယ်။ အဲ့လိုရောဂါရှိသူတွေထဲမှာ၊ ၅ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၈ ရာခိုင်နှုန်းက မိမိကိုယ်မိမိ အဆုံးစီရင်သွားတတ်ပါတယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားလွယ်ခြင်း၊ ဒေါသကြီးခြင်း၊ တဇွတ်ထိုးလုပ်တတ်ခြင်း၊ အဆိုးမြင်စိတ်များခြင်းစတဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ချို့ ယွင်းလက္ခဏာလွန်ကဲရင်လည်း မိမိကိုယ်မိမိ အန္တရာယ် ပြုနိုင်ခြေများတယ်။ အစားရှောင်လွန်းရောဂါ (Anorexia Nervosa)၊အစားကြူးရောဂါ (Bulimia)နဲ့ ဘေးအန္တရာယ်ကြုံတွေပြီး ဖြစ်ပွားစိတ်ဖိစီးမှုရောဂါ (PTSD) ရှိသူများထဲမှာ မိမိကိုယ်မိမိသတ်သေနှုန်းများတယ်။
လူမှုရေးပြဿနာအခက်အခဲ – မျှော်လင့်ချက်ကုန်ဆုံးခြင်း၊ နစ်နာဆုံးရှုံးမှု ခံစားရခြင်း၊ အရှက်တကွဲဖြစ်ရခြင်း၊ သိက္ခာချတာခံရခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ်၊ ထွက်ပေါက်မရှိလှောင်ပိတ်မိနေသလိုခံစားရခြင်းစတဲ့ဖိစီးမှုမျိုးကို ဖြစ်စေတဲ့ လူမှုရေးပြဿနာနဲ့ ကြုံတွေ့ရရင် မိမိကိုယ်မိမိသတ်သေချင်စိတ် ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ ဥပမာ- အလုပ်ပြုတ်ခြင်း၊ စီးပွားရေးပျက်စီးခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးပျက်စီးခြင်းနဲ့ အကြွေးထူလာခြင်းက မိမိကိုယ်မိမိသတ်သေမှု ဖြစ်စေတဲ့ အဓိကလူမှုရေးပြဿနာ ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ (Myanmar Times6July 2018)။
လူငယ်လူရွယ်တွေထဲမှာ စာမေးပွဲကျခြင်း၊ ချစ်သူကပစ်ပယ်တာခံရခြင်း၊ ကျောင်းမှာအနိုင်ကျင့်တာခံရခြင်း၊ လူမှု့ကွန်ရက်ထဲမှာ အနိုင်ကျင့်တာ၊ လိုက်လံနှောင့်ယှက်တာ၊ အရှက်ခွဲတာ၊ အပုပ်ချတာခံရခြင်းစတဲ့ အတွေ့အကြုံရှိရင် သတိထားရမယ်။ အရွယ်ရောက်သူတွေထဲမှာ၊ အိမ်ထောင်ပျက်ခြင်း၊ မိသားစုဝင်တဦးဦး သေဆုံးခြင်း၊ အကြမ်းဖက်နှိပ်စက်တာခံရခြင်းရှိရင်၊ ဒဏ်ခံရသူက ချောင်ပိတ်မိနေသလို ရုန်းထွက်နိုင်စွမ်း မရှိသလိုခံစားရမယ်။ မုဒိမ်းကျင့်ခံရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေက၊ အရှက်ကွဲရတဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်လို့ သေချင်စိတ် ပေါက်လာနိုင်ပါတယ်။
နောက်ကြောင်းရာဇ၀င်- မိသားစုဝင်ထဲမှာ မိမိကိုယ်မိမိ သတ်သေတဲ့ရာဇ၀င်နဲ့ ယခင်ကမိမိကိုယ်မိမိ သတ်သေဖို့ကြိုးစားဖူးတဲ့ အဖြစ်အပျက်ရှိရင်၊ ပိုပြီးသတိထားရမယ်။ အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ အချက်အလက် တွေရှိရင် ဘယ်အသက်အရွယ်မှာမဆိုမိမိကိုယ်မိမိ အန္တရယ်ပြုဖို့ အလားအလာများပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူငယ်ပိုင်းနဲ့ အသက်အိုမင်းသူများထဲမှာမိမိကိုယ်မိမိသတ်သေနှုန်းများပြားတာတွေ့ရတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာမိမိကိုယ်မိမိသတ်သေသူများထဲမှာ ၂၂ ရာခိုင်နှုန်းကအသက် ၁၈ နှစ်မှ ၂၅ နှစ်အတွင်းဖြစ်တယ်။ ၃၆ ရာခိုင်နှုန်းကတော့ အသက် ၂၅ နှစ်မှ ၄၀ အတွင်းဖြစ်တယ်လို့ ဖတ်လိုက်ရတယ်။
မကြာမီ မိမိကိုယ်မိမိ သတ်သေရန်ကြိုးစားမည့် မီးနီပြအရိပ်လက္ခဏာများ
မိမိကိုယ်မိမိ အန္တရာယ်ပြုနိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေရှိသူတိုင်း မိမိကိုယ်မိမိအဆုံးစီရင်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မကြာမီမိမိကိုယ်မိမိသတ်သေနိုင်ခြေများပြားလာတဲ့ မီးနီပြလက္ခဏာ (Imminent Risk) တွေကို အထူးဂရုစိုက်ရပါတယ်။
♦ မိမိကိုယ်မိမိသတ်သေချင်တယ်။ သေတာပဲကောင်းပါတယ် စသဖြင့် ဖွင့်ဟပြောဆိုခြင်း၊ မှတ်တမ်းရေးခြင်း၊ အရိပ်အခြည်ပြခြင်း။
♦ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေကို ပေးဝေခြင်း၊ ရှင်းလင်းပစ်ခြင်း၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများကို နောက်ဆုံး နှုတ်ဆက် စကားလိုက်ပြောခြင်း။
♦ မိမိကိုယ်မိမိအသက်အန္တရာယ် ပြုရန်လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းများကိုစုဆောင်းခြင်း၊ သိုဝှက်ထားခြင်း။ (ဥပမာ- အိပ်ဆေးစုဆောင်းခြင်း၊ ကြိုးခွေကို ရှာဖွေဝှက်ထားခြင်း)
♦ အထီးကျန်နေခြင်း၊ စကားပြောနည်းလာခြင်း၊ မျှော်လင့်ချက်ကုန်ဆုံးစိတ်ရှိခြင်း၊ ထွက်ပေါက်မရှိ ချောင်ပိတ်မိ နေသလိုခံစားလာရခြင်း။
♦ အန္တရာယ်မကင်းတဲ့ အပြုအမူများ ပြုလုပ်လာခြင်းဥပမာ- အရက်မူးအောင်သောက်ခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးမူးခြင်း။
♦ စိတ်အပြောင်းအလဲ မြန်လာခြင်း။
♦ တစ်ညလုံးအိပ်မပျော်ခြင်း။ အိမ်မျက်နှာကြက်ကိုသာစိုက်ကြည့်နေခြင်း။ အိပ်ရာမှ ထိုင်လိုက်ထလိုက်လုပ်ခြင်း။
♦ အတွေးရှုပ်ထွေးခြင်း။ အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုသာထပ်တလဲစဉ်းစားနေခြင်း၊ အတွေးဘောင် ကျဉ်းမြောင်း လာခြင်း (Tunnel Vision)
♦ အလွန်အမင်းစိုးရိမ်သောကပွားများနေခြင်း၊ အလွန်အမင်းဂနာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပါတယ်။
မိသားစုထဲမှာမိမိကိုယ်မိမိသတ်သေဖို့ အန္တရာယ်များသူရှိရင် ဘာလုပ်သင့်သလဲ . . .
♦ အသက်အန္တရာယ်ပြုဖို့ အသုံပြုနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို သိုဝှက်ထားရမယ်။ ဥပမာ- ဓားလက်နက်၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ အရက်ပြန်၊ ဆေးအမျိုးမျိုး။
♦ မိမိကိုယ်မိမိသတ်သေချင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွင့်ဟပြောဖို့ အားပေးတိုက်တွန်းပါ။ ဝေဖန်တာ အပြစ်တင်တာမျိုးမပြောရဘူး။ စာနာပေးရမယ်။ နားလည်ပေးရမယ်။
♦ သေခြင်းတရားဆိုတာ ထာဝရပြောင်းလဲချင်လို့မရတော့ဘူး။ အခုကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြဿနာတွေက တဒင်္ဂ။ ပြောင်းလဲလို့ရတယ်။ ပြောင်းလဲသွားမှာသေချာတယ်ဆိုတာကိုသတိပေးနိုင်တယ်။
♦ သေချင်တဲ့စိတ် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေကိုမေးကြည့်။ ဆက်လက်ပြီးအသက်ရှင်နေသင့်တဲ့ အကြောင့်ရင်းတွေကိုစဉ်းစားခိုင်း။ ဆွေးနွေးခိုင်း။ ဘာဘာရေးနဲ့ တရားပြဖျောင်းဖျ။
♦ မိမိကိုယ်မိမိသတ်သေခြင်းအကြောင်းကိုပြောဆိုဆွေးနွေးလို့ ကာယကံရှင်ကသတ်သေချင်စိတ်ပိုပြီး ပြင်းပြလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်သက်သာမှု ရရှိစေပါတယ်။
♦ ကာယကံရှင်ကစိတ်ရောဂါကုသဆေးသောက်သုံးနေရတယ်ဆိုရင်၊ ဆေးမှန်မှန်သောက်ဖြစ်အောင် ကြည့်ရှုကြပ်မပေးရမယ်။ ကုသပေးနေတဲ့ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းနဲ့ ဆရာဝန်ကို ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးသင့်တယ်။
♦ ကိုဗစ် ၁၉ ကာလ၊ လော့ဒေါင်းခံနေရတဲ့ အချိန်မှာအရေးကြီးရင် ဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းနိုင်တဲ့ Hotline တစ်ခုတွေ့ရှိရတယ်။ Callme Today လို့ ခေါ်တယ်။ ဖုန်းနံပါတ် + ၉၅၉ ၆၉၃ ၅၅၇ ၇၄၈ လို့ သိရပါတယ်။